Shir looga hadlayo amniga Soomaaliya oo ka bilowday Brussels | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Shir looga hadlayo amniga Soomaaliya oo ka bilowday Brussels
Shir looga hadlayo amniga Soomaaliya oo ka bilowday Brussels
Muqdisho (SNTV) Shir looga hadlayo amniga Soomaaliya oo uu shir gudoominayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Kheyre, ayaa waxa uu ka bilaawday magaalada Brussels ee dalka Belgium.
Shirka oo ay ka qeyb gelayaan qaar kamid ah madax dowladaha taageera Soomaaliya, ayaa waxaa looga hadlayaa ammaanka Soomaaliya, tayeynta ciidanka iyo hanaanka ugu haboon ee ciidanka Soomaaliyeed ay amaanka dalka ugala wareegi karaan ciidanka AMISOM.
Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub, Cali Saciid Fiqi, oo kamid ah masuuliyiinta madasha shirka kusugan ayaa waxa uu sheegay in shirka looga hadlayo guud ahaan hanaanka amaanka dalka, iyada oo si gaar ah diiradda loo saari doono dhismaha Ciidanka difaaca dalka si amaanka dalka ay ula wareegaan.
Dhanka kale Ra’iisul wasaare Xassan Cali Kheye ayaa la kulmay madaxweyne kuxigeenka Midawga Yurub, Federica Mogherini, oo ay ka wada hadleen xaaladda amni ee dalka iyo sidii Midawga Yurub ay gacan uga geysan lahaayeen qaabka Ciidanka Soomaaliyeed ay amaanka ugala wareegi lahaayeen Ciidanka AMISOM.
Previous articleSomalia Launches the peace building Fund
Next articleWafdi uu hoggaaminayo Wasiir ku Xigeenka Wasaaradda Tamarta & Kheyraadka Biyaha oo Shir uga qeybgalaya Kuwait